FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBicol IsiCebuano IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiNdebele IsiNdonga IsiNgesi IsiNorway IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiShona IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiZulu
UYEHOVA ‘ungumYaleli wethu Ozukileyo.’ (Isa. 30:20) Kuba ebathanda abantu, uyabaqeqesha aze abafundise. Ngokomzekelo ngenxa yothando lwakhe olubalaseleyo, uYehova ubonisa uYesu “zonke izinto yena azenzayo.” (Yoh. 5:20) UYehova uyasithanda, thina maNgqina akhe. Ngenxa yokuba sisenza imigudu yokumzukisa nokunceda abanye, usinika “ulwimi lwabafundileyo.”—Isa. 50:4.
Ixelisa uthando lukaYehova, iKomiti Yokufundisa yeQumrhu Elilawulayo isebenzisa izikolo ezilishumi zentlangano ukuze iqeqeshe abantu abanomdla nabameko zabo zivumayo. Ngaba ezi zikolo uzigqala njengobungqina bokuba uYehova uyasithanda?
Khawukhe ufunde ngakumbi ngezi zikolo zentlangano uze uncokole nabantu abakhe bafunda kuzo. Emva koko zibuze, ‘Ndinokungenelwa njani kule mfundo yobuthixo?’
IINGENELO ZOKUQEQESHWA NGUTHIXO
Njengoko ‘enguThixo wothando,’ uYehova usiqeqeshela ukuphila ubomi bokwenene, asenze sikwazi ukumelana neengxaki, aze asincede sonwabe kubulungiseleli. (2 Kor. 13:11) Njengabafundi benkulungwane yokuqala, usixhobisela ukunceda abanye, ukuze ‘sibafundise ukuba bazigcine zonke izinto’ esiziyalelweyo.—Mat. 28:20.
Nakuba singenakuya kuzo zonke ezi zikolo, kodwa zikho ezimbalwa esinokuya kuzo. Sinokuyisebenzisa imfundo esekelwe eBhayibhileni esiyifumana kuzo. Kanti sinokuphucula ubuchule esinabo entsimini ngokusebenza nabakhonzi bakaYehova abaqeqeshwe kwezi zikolo.
Khawuzibuze, ‘Ngaba iimeko zam ziyandivumela ukuba ndifake isicelo sokuya kwesinye sazo?’
Abakhonzi bakaYehova bakugqala njengelungelo ukuxhasa ezi zikolo zixabisekileyo baze bafunde kuzo. Ngamana uqeqesho olufumana kuzo lungakwenza usondele kuThixo luze lukuxhobisele ukufeza iimbopheleleko akunike zona, ingakumbi leyo ingxamisekileyo yokushumayela iindaba ezilungileyo.
ISikolo Sobulungiseleli Sobuthixo
Injongo Yaso: Kukuqeqesha abavakalisi ukuba bakwazi ukushumayela nokufundisa abantu ngeendaba ezilungileyo.
Ixesha Elichithwayo: Siqhutywa veki nganye.
Indawo Esiqhutyelwa Kuyo: KwiHolo yoBukumkani.
Abanokuba Nenxaxheba: Ngabo bonke abantu abaya rhoqo kwiintlanganiso zebandla, abavumelanayo neemfundiso zeBhayibhile nabaphila ngokuvisisana nemigaqo yamaKristu.
Indlela Yokubhalisa Kuso: Ngumveleli weSikolo Sobulungiseleli Sobuthixo obhalisa abafundi.
USharon okhubazekileyo ngenxa yesifo esiyiamyotrophic lateral sclerosis (ALS), uthi: “ISikolo Sobulungiseleli Sobuthixo sindifundise ukwenza uphando ndize ndiwuchaze umbandela ngokuyondeleleneyo. Asikhange siphelele nje ekuncedeni mna ngokomoya, kodwa sindenze ndafuna ukunceda nabanye.”
UArnie osele enethuba engumveleli ohambahambayo, uthi: “Ndandithintitha ukukhula kwam yaye ndingakwazi ukujonga abantu emehlweni. Esi sikolo sindincedile ukuba ndizithembe. Esebenzisa sona, uYehova undifundise iindlela zokuphefumla xa ndithetha kwanezo zokunikela ingqalelo. Ndiyibulela gqitha into yokukwazi ukudumisa uThixo ebandleni nakubulungiseleli.”
ISikolo Sabafikayo EBheteli
Injongo Yaso: Esi sikolo, silungiselelwe ukunceda abo bafikayo eBheteli ukuba baqhubeke nenkonzo yabo.
Ixesha Elichithwayo: Yimizuzu engama-45 kangangeeveki ezili-16.
Indawo Esiqhutyelwa Kuyo: EBheteli.
Abanokuya Kuso: Kuya amalungu asisigxina entsapho yaseBheteli okanye amatsha-ntliziyo afumene imvume yokukhonza eBheteli kangangonyaka nangaphezulu.
Indlela Yokubhalisa: Amalungu amatsha entsapho yaseBheteli abhaliswa ngokuzenzekelayo.
UDemetrius owaya kwesi sikolo ngeminyaka yee-1980 uthi: “Esi sikolo saphucula indlela endifunda ngayo saza sandinceda ndalungela iminyaka emininzi yokuba seBheteli. Abaqhubi besi sikolo, oko kufundiswayo kuso, nesiluleko esiluncedo zandiqinisekisa ukuba uYehova uyandithanda yaye ufuna ukundinceda ndiphumelele kwinkonzo yaseBheteli.”
UKaitlyn uthi: “ISikolo Sabafikayo eBheteli sandinceda ndabona ukuba eyona nto ibalulekileyo kukwenza izinto ngendlela kaYehova. Sandenza ndamxabisa uYehova, indlu yakhe kunye nentlangano yakhe.”
ISikolo Sobulungiseleli SoBukumkani
Injongo Yaso: Kukuqeqesha abaveleli abahambahambayo, abadala kwakunye nezicaka zolungiselelo maxa wambi ukuze bakwazi ukongamela nokunyamekela iimbopheleleko zabo. (IZe. 20:28) Kwesi sikolo kuthethwa ngeemeko ezikhoyo, imikhwa kwakunye neemfuno zamabandla. Esi sikolo siqhutywa emva kweminyaka embalwa ngokolwalathiso lweQumrhu Elilawulayo.
Ixesha Elichithwayo: Kutshanje, esi sikolo siqhutywa kangangeentsuku ezimbini ukuya kwezimbini ezinesiqingatha, kubadala sithatha usuku olunesiqingatha, size kwizicaka zolungiselelo siqhutywe usuku olunye.
Indawo Esiqhutyelwa Kuyo: Sidla ngokuba kwiHolo yoBukumkani okanye kweyeNdibano.
Abanokuya Kuso: Ngabaveleli ohambahambayo, abadala okanye, izicaka zolungiselelo.
Indlela Yokubhalisa: Ngumveleli wesiphaluka omemela abadala nezicaka zolungiselelo kwesi sikolo. Bona abaveleli abahambahambayo bamenywa yiofisi yesebe.
“Nangona esi sikolo sixubusha inkcazelo eninzi ngexesha nje elingephi, siyabanceda abadala bahlale bonwabile baze ‘baqhubeke njengamadoda’ kwinkonzo kaYehova. Abadala abasaqalayo nabo sele bengamagqala bafunda ukwalusa ngendlela eyiyo baze bamanyane ‘engcamangweni enye.’”—UQuinn (ngezantsi).
“Esi sikolo sisincede gqitha ekuqondeni imiba ephathelele ukholo lwethu, sasilumkisa ngeengozi ezithile saza sasinika amacebiso ngeendlela zokunyamekela umhlambi. Simbulela gqitha uYehova ngokusinceda.”—UMichael.
ISikolo Senkonzo Yobuvulindlela
Injongo Yaso: Kukunceda oovulindlela ‘babufeze ngokupheleleyo ubulungiseleli babo.’—2 Tim. 4:5.
Ixesha Elichithwayo: Ziiveki ezimbini.
Indawo Esiqhutyelwa Kuyo: Ikhethwa yiofisi yesebe; idla ngokuba yiHolo yoBukumkani.
Abanokuya Kuso: Ngabo bebengoovulindlela abathe ngxi kangangonyaka ubuncinane. *
Indlela Yokubhalisa: Oovulindlela abafanelekayo bamenywa ngumveleli wesiphaluka abakuso.
ULily (ekunene) uthi: “Esi sikolo sindincede ndakwazi ukujamelana neengxaki endidibana nazo kubulungiseleli nakubomi bam. Itsho yaphucuka nendlela endifunda ngayo, endifundisa ngayo kwanendlela endiyisebenzisa ngayo iBhayibhile. Ngoku ndifuna ukuya kunceda abanye, ndixhase abadala ndize ndibe negalelo ekukhuleni kwebandla.”
UBrenda oye kabini esikolweni uthi: “Sindenze ndazimisela gqitha ekukhonzeni uYehova, saqeqesha isazela sam, saza sandikhuthaza ukuba ndincede abanye. UYehova unesisa ngokwenene!”
^ isiqe. 40 Ukuba oovulindlela abatsha abanelanga, kusenokucelwa abanye oovulindlela abagqibela ukuya esikolweni kwiminyaka engaphezu kwemihlanu edluleyo ukuze bazalise iklasi.
Injongo Yaso: Kukunceda abadala bazinyamekele kakuhle iimbopheleleko zebandla baze bakuqonde ngakumbi oko kufunwa nguYehova kubo.
Ixesha Elichithwayo: Ziintsuku ezintlanu.
Indawo Esiqhutyelwa Kuyo: Ikhethwa yiofisi yesebe; idla ngokuba yiHolo yoBukumkani okanye eyeNdibano.
Abanokuya Kuso: Ngabadala kuphela.
Indlela Yokubhalisa: Abadala bamenywa yiofisi yesebe.
Khawuve oko kwathethwa ngabanye ababekwiklasi yama-92 eUnited States:
“Sindincede gqitha esi sikolo kuba ndiyakwazi ukuzihlola ndize ndibone indlela endinokuwunyamekela ngayo umhlambi kaYehova.”
“Sindixhobisele ukukhuthaza bonke abantu ngokugxininisa iingongoma ezibalaseleyo zeZibhalo.”
“Olo qeqesho luya kundinceda de ndiyokufa.”
ISikolo Sabaveleli Abahambahambayo Nabafazi Babo
Injongo Yaso: Kukunceda abaveleli beziphaluka nabezithili ukuze bawancede kakuhle amabandla njengoko ‘besebenza nzima ekuthetheni nasekufundiseni’ nokwalusa abo babanyamekelayo.—1 Tim. 5:17; 1 Pet. 5:2, 3.
Ixesha Elichithwayo: Ziinyanga ezimbini.
Indawo Esiqhutyelwa Kuyo: Ikhethwa yiofisi yesebe.
Abanokuya Kuso: Ngabazalwana abangabaveleli beziphaluka okanye abezithili.
Indlela Yokubhalisa: Yiofisi yesebe emema abaveleli abahambahambayo nabafazi babo.
“Sasinceda sayixabisa ngakumbi indlela uYesu abusebenzisa ngayo ubuntloko bakhe kwintlangano. Siye sasibonisa indlela ekubaluleke ngayo ukukhuthaza abazalwana emabandleni nokomeleza umanyano kwibandla ngalinye. Esi sikolo sabethelela kuthi into yokuba, ngoxa abaveleli beziphaluka benikela amacebiso kwaneziluleko maxa wambi, eyona njongo yabo iphambili kukunceda abazalwana baqonde ukuba uYehova uyabathanda.”—UJoel owayekwiklasi yokuqala eyayingowe-1999.
ISikolo SeBhayibhile Sabazalwana Abangatshatanga
Injongo Yaso: Kukunceda abadala nezicaka zolungiselelo ezingatshatanga zikulungele ukwenza imisebenzi engakumbi kwintlangano kaYehova. Abaninzi abaphumeleleyo baya kwabelwa naphi na apho kukho indingeko kwilizwe labo. Abanye basenokuthunyelwa kwelinye ilizwe ukuba banokwazi ukuya kulo. Kanti abanye banokukhonza njengoovulindlela abakhethekileyo bexeshana ukuze baqalise baze bandise umsebenzi kwimimandla ekwanti.
Abanokuya Kuso: Ngabazalwana abangatshatanga abamalunga neminyaka engama-23 ukusa kwengama-62 ubudala abasempilweni nabafuna ukukhonza kwiindawo ezinendingeko. (Marko 10:29, 30) Bamele babe bakhonze njengoovulindlela abathe ngxi kangangeminyaka emibini ubuncinane, babe zizicaka zolungiselelo okanye abadala iminyaka emibini elandelelanayo.
Indlela Yokubhalisa: Kwindibano yesiphaluka kubakho intlanganiso yabo banomdla kuso.
URick owayekwiklasi yama-23 eUnited States uthi: “Ukuba kwesi sikolo kwabangela ukuba umoya kaYehova unditshintshe. Xa uYehova ekunike isabelo, uyakuxhasa kuso. Ndifumanise ukuba xa ndinikela ingqalelo ekwenzeni ukuthanda kukaThixo kungekhona okwam uya kundomeleza.”
UAndreas oseJamani uthi: “Ndifunde ukuyiqonda into yokuba intlangano kaYehova isebenza ngendlela emangalisayo namhlanje. Esi sikolo sindixhobisele umsebenzi endiwabelweyo. Kanti, imizekelo emininzi yeBhayibhile endiyifundileyo indincede ndaqonda le nto ibalulekileyo: Ukukhonza uYehova nokunceda abazalwana konwabisa ngokwenene.”
ISikolo SeBhayibhile Sezibini EzingamaKristu
Injongo Yaso: Kukuqeqesha ngokukhethekileyo izibini ezitshatileyo ukuze zilungele ukusetyenziswa ngakumbi nguYehova nentlangano yakhe. Ezininzi eziphumelele apho ziya kuthunyelwa kwiindawo ezinendingeko enkulu kwakumazwe azo. Ezinye zinokuthunyelwa kwamanye amazwe ukuba zizenza zifumaneke. Kanti ezinye zinokukhonza njengoovulindlela abakhethekileyo bexeshana ukuze ziqalise okanye zandise umsebenzi kwimimandla ekwanti.
Indawo Esiqhutyelwa Kuyo: Esi sikolo siyaqhutywa eUnited States yaye ekuqaleni kukaSeptemba 2012, siza kuqhutyelwa kumasebe athile ehlabathini, ngokuqhelekileyo kwiHolo yoBukumkani okanye eyeNdibano.
Abanokuya Kuso: Zizibini ezitshatileyo ezineminyaka engama-25 ukusa kwengama-50 ubudala nezisempilweni, eziza kukwazi yaye zikulungele ukuya kukhonza apho kufuneka abavakalisi abangakumbi khona nezinesimo sengqondo esithi “Ndikho! Thuma mna.” (Isa. 6:8) Zimele ukuba sele zitshate kangangeminyaka emibini ubuncinane yaye bezikwinkonzo yexesha elizeleyo iminyaka emibini elandelelanayo. Indoda ifanele ukuba sele ingumdala okanye isicaka solungiselelo kangangeminyaka emibini elandelelanayo ubuncinane.
Indlela Yokubhalisa: Kubakho intlanganiso kwindibano yesithili yabo banomdla wokuya. Ukuba azibikho ezo ntlanganiso kwindibano yesithili yelizwe lakho, unokubhalela iofisi yesebe ukuze ufumane inkcazelo engakumbi.
“Ezi veki zisibhozo zililungelo elimangalisayo kwizibini ezifuna ukuzijula nofele kwinkonzo kaYehova! Sizimisele ukulungelelanisa indlela esiphila ngayo, nto leyo eza kusenza silisebenzise kakuhle ixesha lethu.”—UEric noCorina (ngezantsi), ababekwiklasi yokuqala yowama-2011.
ISikolo SeBhayibhile SeWatchtower SaseGiliyadi
Injongo Yaso: Kukuqeqesha abo bafunda kuso ukuba babe ngabathunywa bevangeli kwimimandla enabantu abaninzi, babe ngabaveleli beziphaluka okanye basebenze eBheteli. Xa befika kwezo zabelo bomeleza intsimi kwakunye nendlela elisebenza ngayo isebe.
Ixesha Elichithwayo: Ziinyanga ezintlanu.
Indawo Esiqhutyelwa Kuyo: KwiZiko Lemfundo LeWatchtower, ePatterson, eNew York, eUnited States.
Abanokuya Kuso: Zizibini ezitshatileyo ezisele zikuhlobo oluthile lwenkonzo ekhethekileyo yexesha elizeleyo—oko kukuthi bezingabathunywa bevangeli abangakhange baye esikolweni, oovulindlela abakhethekileyo, abaveleli abahambahambayo okanye abasebenzi baseBheteli. Zimele ukuba bezikuloo nkonzo ubuncinane iminyaka emithathu elandelelanayo. Zimele zikwazi ukuthetha, ukufunda nokubhala isiNgesi kakuhle.
Indlela Yokubhalisa: Izibini zinokucelwa yiKomiti yeSebe ukuba zifake izicelo.
ULade noMonique abasuka eUnited States ngoku bakhonza eAfrika. ULade uthi: “ISikolo saseGiliyadi sisenze sakulungela ukuya naphi na ehlabathini size sisebenze nabazalwana bethu abathandekayo.”
UMonique waleka ngelithi: “Ndonwabe kakhulu kwisabelo sam njengoko ndisenza izinto endizifunde kwiLizwi likaThixo. Ukonwaba ngolo hlobo kundiqinisekisa ngakumbi ukuba uYehova uyandithanda.”
ISikolo Samalungu EKomiti Yesebe Nabafazi Bawo
Injongo Yaso: Kukunceda amalungu eeKomiti zamaSebe ukuba akwazi ukuvelela amakhaya aseBheteli, anikel’ ingqalelo kwimibandela yenkonzo ephathelele amabandla, aze avelele neziphaluka kwakunye nezithili ezikwintsimi yawo. Akwafunda nangokuguqulela, ukushicilela, kwanokuthumela uncwadi.
Abanokuya Kuso: Abazalwana bamele babe ngamalungu eKomiti Yesebe okanye aweKomiti Yelizwe okanye esinye isabelo esifana nezo.
Indlela Yokubhalisa: LiQumrhu Elilawulayo elimema aba bazalwana nabafazi babo.
ULowell noCara, ababekwiklasi yama-25 ngoku bakhonza eNigeria. ULowell uthi: “Into eyabethelelwayo kukuba enoba ndixakeke kangakanani na okanye ndenza ntoni na, eyona nto ibalulekileyo kukwenza izinto ngendlela kaYehova. Kanti esi sikolo sikwabethelele nento yokuba simele siphathe abanye abantu ngothando, kanye njengokuba uYehova esenza kubakhonzi bakhe.”
UCara wongeza ngelithi: “Amanye amazwi endikhe ndawetyisa ngala: Ukuba andikwazi ukuyicacisa kakuhle ingongoma, kufuneka ndihambe ndiye kuwufunda loo mbandela ngaphambi kokuba ndiwufundise abanye abantu.”
IMBONISELO (YOKUFUNDISA) Septemba 2012
Itheko Leklasi Ye-136 Labaphumelele KwiSikolo SeBhayibhile SeWatchtower SaseGiliyadi
Itheko Leklasi Ye-135 YeSikolo SeBhayibhile SeWatchtower SaseGiliyadi